Makore makumi maviri-e-Vila-y-Chamorro: Kure neMoyo. Lorenzo Silva. | Zvazvino Zvinyorwa
Iyo Strait yeGibraltar, chiitiko cheLejos del Corazón, chikamu chitsva cheVila y Chamorro.
Kunyange zvakadaro Vila naChamorro usati wakura kunge makore apfuura kubvira chikamu chekutanga icho Nyika iri kure yemadziva muna 1998, kana paine nguva yakakwana pakati pavo uye, pamusoro pezvose, zviitiko zvakawanda zvekuti zuva rega rega vanova vanofunga zvakanyanya, vanokura uye vasingakurumidze kufunga: Kure neMoyo ndiye kuendesa nhamba 11 yezvakateerana. Silva anokura mune yega yega semunyori uye pamwe naye mavara ake.
"Zvichida chinetso chikuru muhunyanzvi hwekurarama chine nzira yekugara wakanamatira pamazuva apo hupenyu hunotanga kukutumira zviratidzo zvekuti watanga kushandisa kwazviri."
Apa ndipo panotangira Kure neMoyo, mumashoko aBevilacqua, Vila, parizvino mutevedzeri wechipiri weVarindi Vemagariro.
1 Kure neMoyo: Zano.
2 Mhosva munyika inowedzera yedhijitari:
3 Ivo protagonists:
4 Kutanga kweVila y Chamorro.
Kure neMoyo: Zano.
Mune chiitiko chitsva ichi, vanotarisana nenyika yakafanana zvikuru uye yakasiyana kwazvo Iyo yavakaita apo vese vari vaviri vaive vakawandisa rookies muvashandi vehurumende, Rubén Vila, sajeni, Virginia Chamorro, murindi achangobuda muchikoro. Gara muCádiz, muSan Roque, Sotogrande, La Línea de la concepción uye Gibraltar., nzvimbo uko jogirafi nezvematongerwo enyika zvinobvumidza iyo narcotráfico chizvarwa nechizvarwa chinopfuurira sekunge nguva yanga yamira ipapo.
"Vakakurira munharaunda uye mutsika umo mari chiri chinhu chose: simba, mukurumbira, hunhu hwakachengeteka hwekutungamira hupenyu uhwo chero munhu anochiva."
Padivi pake, mumumvuri wake, akaurayiwa munyika dzeBritish dze Gibraltar, kubiridzira mari. Silva anotiratidza mashandisiro akaita zvinhu, asi zvakanyanyisa, zvirinani munzira yekuzviita. Iine iyo virtual mari sekubatana kwenhoroondo, Vila naChamorro vanosangana nekutsakatika kwakaputirwa BitCoins, kuba kwekugadzirisa kugona uye kubiridzira kwemadhijitari.
"Chimwe chezvikonzero zvakawanda chekutanga hutongi hwehunyanzvi hwepamhepo, asi iwe unotozviziva: kana zvasvika pakutongwa, hapana chakakosha kana chakurumidza chinotarisirwa."
Mhosva munyika inowedzera yedhijitari:
ari nyanzvi dzemakomputa eCivil Guard vane mukati Kure nemoyo un kurema mukugadzirisa kusawirirana zvinoenderana nenguva yemagariro yatiri kurarama, ivo vangadai vasina kumbofungidzira vaviri vane mukurumbira vaviri muCorps pavakasiya chikoro.
Bitcoins, kubiwa kwemadhijitari, kubiwa kwehuwandu hwekugona uye kubiridzira mari zvinoumba zano reKuva kure neMoyo.
Lorenzo Silva ndiye zvaari uye haakwanise kuzvibatsira imwe nyambo yezvematongerwo enyika asi izvo hazvitadzise zvachose yakanaka mutinhimira wechirongwa.
"Ngatione, imi vaviri, kana muchida kuzvipira kuita shanduko dzemitemo, kumbirai zororo rekusavapo uye muchaonekwa musarudzo dzinotevera nerondedzero yemaprofrautas."
Zvakare Vila naChamorro, vanakidza, vanoita, zvakanyanya kana zvichibvira, kupfuura pakutanga. Iyo Chamorro kudzikama uye kutsungirira, Na Vila akasiya huziviIvo vanoita kuti tifungisise apo isu tinopedza nhoroondo kuti tione kuti ndiani akaipa pane vakaipa vakomana.
"Kunyangwe kubva pane imwe nguva hupenyu ndeichi, nguva dzese: takatarisana neshanduro dzako dzausina kumbofungidzira uye kuti iwe hauzive kuti gehena kutsanangurira sei mwana uyo achiripo, akavanzwa kumwe kunhu."
Musha Iye achiri zvaari, asi zvakanyanyisa kudzikama, inoenderera mberi nekufunga kwake kwouzivi:
"Kuzvidzora zvine mwero hafu mufaro."
Ramba uchipenda wakundwa masvinu etini:
"Kusurukirwa kunodzikisira," Bevilacqua anoudza amai vake.
Y ivo vaviri vanogara mweya miviri yakasurukirwa kune avo hukama husinga fambe zvakanaka.
"Kune zvinhu zvinorega kuve nekuti ivo havafanirwe kuramba varipo uye pamusoro pavo chigumbu chakashata senge chero chishuwo chekusuwa."
Kutanga kweVila y Chamorro.
Vamwe vapepeti vakatadza pavakaramba kuburitsa nyaya yekutanga yevarindi vehurumende, Nyika iri kure yemadziva. Zviri nyore kwazvo kuzviona zvakajeka nhasi, mushure kuendesa makumi maviri uye nemamirioni maviri mabhuku akatengeswa, asi chokwadi ndechekuti hapana anoziva nzira yekufanotaura nezveramangwana, zvisinei nekuti vangave vaparidzi zvakadii.
Nhasi, nhoroondo yekuparwa kwemhosva kuSpain haizove yakafanana pasina Lorenzo Silva, chiono icho vaverengi veVarindi Vanove vari pedyo nekutenda kuna Vila, Chamorro nevamwe vavanoperekedza muchiitiko chimwe nechimwe.
Sezvo Rubén Bevilacqua pachake anoti:
"Hupenyu, muripo wezvese zvinotora kubva kwauri, kubva mukusava nemhosva kune simba rehudiki, inokupa kwete chete zvimwe zvishandiso asi zvakare kugadzikana kuzvishandisa, uye kuzviita nenzira isiri ine mukurumbira."
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Makore makumi maviri aVila y Chamorro, vanozivikanwa vevarindi vehurumende vakasikwa naLorenzo Silva.
Nhasi uno mucherechedzo makumi mapfumbamwe nemasere ekuzvarwa kwe PD James